बाढीप्रतीको संकट्टासन्नताको मापन कसरी गर्न सकिन्छ? – नेपाल बाढी उत्थानशीलता पोर्टल
बाढीप्रतीको संकट्टासन्नताको मापन कसरी गर्न सकिन्छ?
Posted on फ्रेवुअरी 10, 2016 | by Smart Solutions
समुदायको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, वातावरण ,पारिवारिक स्थितिको आधारमा संकट्टासन्नता पनि भिन्न हुन्छन् । तसर्थ,एकै समुदायका परिवारहरुको संकट्टासन्नता फरक हुनसक्छ ।संकट्टासन्नता क्षमता विश्लेषणले प्रभावित समुहको पहिचान गरि प्रकोपको कारण,कारक तत्त्वको समेत पहिचान गर्दछ । समुदायको आवश्यकता र क्षमताको आकंलन गर्दे परियोजना ,कार्यक्रम र नीतिहरुले आवश्यकताहरुको सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित गर्दछ ।